Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana: Misy mpilatsaka hamoronana « dossiers »
Fifidianana: Misy mpilatsaka hamoronana « dossiers »
Miteraka resaka be dia be amin’ny tontolon’ny politika Malagasy ankehitriny ny fahitana ny fingampingana maro samy hafa apetrakin’ny fanjakana HVM izay taritin’ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ity.
Io efa iarahana mahita ankehitriny io ny disadisa izay aterakin’ny fandaniana ny lalàm-pifidianana amin’izao fotoana izao izay natolotrin’ny governemanta Solonandrasana Olivier Mahafaly. Tsy lany tamin’ny fivoriana manokana voalohany nataon’ny solombavambahoaka, ka izao naverina hodinihina izao indray. Gidragidra nefa no mitranga ankehitriny.
Manambara ny heviny ny fiarahamonim-pirenena amin’ny fanamarihana miisa 50 izay heverin’izy ireo fa tsy mifanaraka amin’ny lalàna sy ny demôkrasia izay takiana amin’izao fotoana izao. Tsy tenenina intsony ny voalazan’ireo antoko mpanohitra izay manana solontena ao amin’ny antenimierampirenena ao Tsimbazaza. Efa tena fihantsiana sy adilahy politika no hita ao amin’ny fanohanana be fahatany ataon’ny depiote andaniny sy ankilany. Izay baikon’ny filohan’ny antokony ihany no arahany na dia efa hampiditra ny Malagasy any amin’ny afobe aza izany. Tsy mandinika ny volavolan-dalàna hofidiana akory fa dia mpananga-tànana sy mpandray vola fotsiny sisa ataon’izy ireo amin’ny alalan’ny malety na ny kolikoly izay mampalaza ity andrimpanjakana ity ankehitriny.
Ankoatran’izany koa dia efa manao fampielezan-kevitra ny kandida izay mihevitra azy fa matanjaka ka mitety toerana maro.
Ny tena olana ankehitriny nefa dia mifampikapa sy mifamely amin’ny lalàna izy ireo ka ny fitsarana indray amin’izao fotoana izao no tadian’ny mpitondra ho fitaovana hampiasaina amin’ny fanilihana ny mpilatsaka hofidina tsy tiana sy atahorana. Mandeha dia mandeha ny resaka fa misy ny endrika politika ny fandehanan’ny raharaha Orlando Robimanana izay tale jeneralin’ny tahirimbolam-panjakana teo aloha iny ka voarohirohy amin’ny raharaha Claudine Razaimamonjy ka iny nahazo fahafahana vonjy maika iny ny herinandro lasa teo. Ankehitriny ary dia misy koa olona hafa izay hilatsaka hofidiana no lasibatra any ambadika any ka amin’ny volana aprily sy may izao no havoaka indray hono raharaha mahakasika azy ireo. Ho hitantsika ny fahamarinan’izany satria mandeha dia mandeha ny resaka fa maro no mpilatsaka manana “dossier” homena any amin’ny fitsarana amin’izao fotoana izao, na mpiasam-panjakana izany na mpandraharaha. Izany hono no antony ametrahana ny fitakiana ny “bulletin n° 2” amin’ny filatsahana hofidiana ao amin’ity volavolan-dalàm-pifidianana ity.
Ny zava-misy ankehitriny dia mifampiandry amin’ny lafiny maro ny mpifaninana ka izay tsy tratra amin’ny lalàna dia sakatsakanana amin’ny alalan’ny politika. Misy hatrany amin’ny fampihorohoroana izany rehetra izany raha ny feo mandeha eny amin’ny mpanao politika amin’izao fotoana izao na resahina, fa indrindra hoan’ny mpandraharaha izay katsahina ho sakanina amin’ny alalan’ny hetra. Hatrany amin’ny orinasa avy no mizaka ny vokatry ny politika maloto ankehitriny ka sakanana tsy hiasa izy ireny.
Noterena holaniana tamin’ny zoma faha 23 martsa 2018 teo aza ity lalàm-pifidianana ity teny amin’ny antenimierampirenena nefa tsy raikitra izany fa korontana no vokatr’izany teo amin’ny samy depiote.
Marina fa misy mamaly ny hetahetam-bahoaka ihany ny zavatra vitsivitsy amin’ny lalàm-pifidianana ankehitriny saingy tsy atao ampahamarinana izany fa fonosina zavatra hafa.
Atahorana mafy ny korontana noho izany, ka tokony hitandrina isika.
Aorian’ingahy Orlando Robimanana sy ingahy Ravalomanana Marc dia iza indray no mpilatsaka hanana raharaha any amin’ny fitsarana ka tsy hahazo hilatsaka hofidina? Ny ampitso no hitondra fanazavana amin’izany.